Semalt कसरी गुगल खोजी परिणामहरूबाट केहि वेबसाइटहरू रोक्ने बारे वर्णन गर्दछ
गुगलले यसको एल्गोरिदम लगभग हरेक दिन परिवर्तन गर्दछ र प्रत्येक परिवर्तन वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूको लागि सधैं राम्रो हुँदैन। त्यहाँ समयहरू छन् जब तपाईंको वेबसाइट अपडेट गरिएको गुगल नीतिहरूको कारण प्रतिबन्धित हुनेछ। त्यसमाथि, यसको भू-विशिष्ट खोज परिणामहरू र निजीकरण प्रभावित हुने सम्भावना छ। गुगल खोजी परिणामबाट धेरै वेबसाईटहरू रोक्न राम्रो हुन्छ ताकि तपाईंको वेब पृष्ठहरू सजिलैसँग देखिनेछ। धन्यबाद, गुगल खोजी परिणामबाट केहि वेबसाइटहरू रोक्न केहि तरिकाहरू छन्।
ती मध्ये केही Sevant डिजिटल सेवाहरु का एक शीर्ष विशेषज्ञ इवान कोनोवालोभ द्वारा तल छलफल गरिएको छ।
१. व्यक्तिगत वेबसाइट ब्लकसूची:
तपाईंको गुगल क्रोममा व्यक्तिगत वेबसाइट ब्लकसूचीहरू सिर्जना गर्न सजिलो छ। यसका लागि तपाईंले गुगल एक्स्टेन्सन स्थापना गर्नुपर्नेछ। एकचोटि यो स्थापना भएपछि, तपाईले साइटहरू वा यूआरएलहरू रोक्नको विकल्प देख्नुहुनेछ जुन प्राय जसो तपाईंलाई झेलो पार्छ र गुगल साइट खोजीमा तपाईको साइटलाई पछाडि धकेल्छ। एकचोटि तपाईंले ब्लक विकल्पमा क्लिक गर्नुभयो, ती वेबसाइटहरू तुरून्त गुगल खोजी परिणामहरूबाट हराउनेछ। तपाईं यी साइटहरूमा तपाईंले तिनीहरूलाई अन्य बाट ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले याहू र बिंग को खोज परिणाम, देखा भन्ने सम्झनुपर्छ खोज इन्जिन को यो प्रविधी प्रयोग गरेर।
२. Google.com बाट हालको होस्ट रोक्नुहोस्:
Google.com बाट हालको होस्टलाई ब्लक गर्न सजिलो छ। यदि तपाईंसँग गुगल क्रोम सेटिंग्स अनुभाग खुला छ, तपाईं शI्कास्पद वा वयस्क वेबसाइटहरू ब्लकआईटी बटन क्लिक गरेर रोक्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँ शो विकल्पमा क्लिक गर्नुहुन्छ, उही वेबसाइटहरू तपाइँको गुगल खोजी परिणामहरूमा फेरी देखा पर्नेछ।
यदि तपाईं हालसालै ब्लक गरिएका साईटहरूको सूची हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले उपकरणपट्टीमा ब्लकसूची आइकनमा क्लिक गर्नु आवश्यक छ। यो सामान्यत: सुन्तला रंगमा देखा पर्दछ र एक हात आइकन छ।
Google. गुगलको वेबस्पम रिपोर्ट प्लगइन:
माथिका दुई विधिहरू बाहेक, गुगलको वेबस्पम रिपोर्ट प्लगइन पनि राम्रोसँग राम्रोसँग जानको लागि छ। यसले तपाईंलाई संदिग्ध र वयस्क वेबसाइटहरूलाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गर्न दिन्छ। वास्तवमा, यो सब भन्दा सजिलो र उत्तम विकल्प हो किनकि तपाईं सकेसम्म धेरै वेबसाइटहरू र ब्लगहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि स्प्यामको पर्याप्त रिपोर्टहरू गुगलमा पठाइयो भने, खोजी ईन्जिनले अन्ततः दण्ड दिन्छ र यसको नतिजाहरूबाट साइट रोकिन्छ।
यो विस्तारको साथ, तपाईं गुगल खोज ईन्जिनबाट सबै अनावश्यक र शंकास्पद परिणामहरू रोक्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, यो प्लगइन सफारी र अन्य वेब ब्राउजरहरूमा राम्रोसँग काम गर्दैन। यसको मतलब तपाई यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ केवल जब तपाई गुगल क्रोम मार्फत वेबसाइटहरू सर्फ गर्नुभयो र यस ब्राउजरलाई प्राथमिक विकल्पका रूपमा।
Firef. फायरफक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि:
यदि तपाईं फायरफक्स प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, सम्भव छ समान एड-अनहरू स्थापना गर्न जुन खोजी परिणामहरूबाट सबै अनावश्यक साइटहरूलाई ब्लक गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक WordPress साइट छ, तपाईं एक प्लगइन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि फायरफक्स खोज परिणामबाट अनावश्यक साइटहरू ब्लक गर्न मद्दत गर्दछ। एकचोटि पूर्ण रूपमा स्थापना भएपछि, तपाईं प्लगइन सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ वा साईटहरू र ब्लगहरू हटाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नो गुगल खोजी परिणामहरूमा देखाउन चाहनुहुन्न।
यी सबै विधिहरू अनुसरण गर्न सजिलो छ र सबै प्रकारका वेबसाइटहरू, ब्लगहरू, र सोशल मीडिया पृष्ठहरूको लागि प्रभावकारी छ।